Wasaaradda Waxbarashadda Somaliland iyo Dugsiyadda Gaarka Loo Leeyahay Oo Go’aano Wadda Gaadhay – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Wasaaradda Waxbarashadda Somaliland ayaa maanta kulan iskugu yeedhay dhamaan maamulayaasha iyo mulkiilayaasha dugsiyadda gaarka loo leeyahay si loo soo gunaanado dood muddo soo socotay.
Dugsiyadda gaarka loo leeyahay ee dalka ayaa ardayda bara manhajyo kala duwan oo luuqaddo kala duwan lagu dhigto, waxaana dugsiyaddan into badan lagu dhigtaa luuqadda Af-carabiga ah iyo Ingiriisiga, waxaana gabi ahaanba ardayda into badan loo dhigin maadada afka-soomaaliga.
Ujeedada kulankan maanta dhex maray wasaaradda waxbarashadda Somaliland iyo dugsiyadda gaarka loo leeyahay ayaa laga lahaa sidii loo midayn lahaa waxbarashadda kala duwan ee dugsiga gaarka ah iyo kuwa dawliga ah.
Wasiirka Waxbarashadda Somaliland Md. Cabdilaahi Ibraahim Habane ooka haldday kulankan ayaa sheegay muhiimadd ay leedahay in la mideeyo manhajyadda waxbarashadda dalka.
Guddi matalaysay Dugsiyadda gaarka loo leeyahay ayaa iyaguna sheegay in wasaaradda waxbarashadda Somaliland isla qaateen in manhajka Somaliland wax lagu dhigo, balse dugsi kastaaba luuqadda uu ku dhigo uu dhigo manhajka Somaliland.